Embassy of the Republic of the Union of Myanmar , London | နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်၊ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးက ဥရောပပြည်ပဆက်ဆံရေးဌာနမှ High Representative of European Union/ Vice President of European Commission၊ ပြင်သစ်နိုင်ငံခြားရေးနှင့် ဥရောပရေးရာဝန်ကြီး နှင့် ဖင်လန်နိုင်ငံခြားရေးဝန
နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်၊ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးက ဥရောပပြည်ပဆက်ဆံရေးဌာနမှ High Representative of European Union/ Vice President of European Commission၊ ပြင်သစ်နိုင်ငံခြားရေးနှင့် ဥရောပရေးရာဝန်ကြီး နှင့် ဖင်လန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးတို့အား သီးခြားစီ လက်ခံတွေ့ဆုံ�(၂၀-၁၁-၂၀၁၇ ရက်၊ နေပြည်တော်)
နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်၊ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် ဥရောပပြည်ပဆက်ဆံရေးဌာန (European External Action Service – EEAS)မှ High Representative of European Union/ Vice President of European Commission ဖြစ်သူ H.E. Mrs. Federica Mogherini ၊ ပြင်သစ်နိုင်ငံခြားရေးနှင့် ဥရောပရေးရာဝန်ကြီးဌာန ဝန်ကြီး H.E. Mr. Jean-Yves le Drian နှင့် ဖင်လန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ဝန်ကြီး H.E. Mr. Timo Juhani Soini တို့အား ၂၀-၁၁-၂၀၁၇ ရက်နေ့တွင် နေပြည်တော်ရှိ မြန်မာအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ကွန်ဗင်းရှင်းဗဟိုဌာန (၁) ဧည့်ခန်းမ၌ သီးခြားစီ လက်ခံတွေ့ဆုံခဲ့ပါသည်။
ထိုသို့တွေ့ဆုံစဉ် မြန်မာနိုင်ငံနှင့် ဥရောပသမဂ္ဂအကြား ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များ၊ နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးတိုးမြှင့်ရေးနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကိစ္စနှင့် ရခိုင်ပြည်နယ်အခြေအနေတို့နှင့်ပတ်သက်၍ နှစ်ဖက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်သည့်ကိစ္စတို့ကို အမြင်ချင်းဖလှယ် ဆွေးနွေးခဲ့ကြကြောင်းသိရှိရပါသည်။